Haalli Nageenya Afgaanistan Daandii Sirrii Qabatee Akka HIn Jiraatin Yunaayitid Isteetis Amante
Dandeettiin waraana humnootii naga eegumsa Afgaanistaaniin kan wal hin ginne Talibaan daran hidhannoo cimsuu dhaan biyyattii waraanaan bututte to’achuuf lolaa jiran.
Angawoonni Yunaayitid Isteetis haalli Afgaansitaan keessaa yaaddessaa ta’uu ibsuu dhaan, Talibaan sadarkaa ol aanaa Pentaagoniin kan hin hubatamin sa’aatilee 72n darban keessa magaalaalee konyaalee shan to’ate jedhan.
Dubbi himaan ministrii ittisaa Yunaayitid Isteetis Joon Kirbaay, Afgaanistan daandii sirrii irra jiraachuu dhabuun ifa gala dha jechuu dhaan ministriin ittisaa Lloyd Austiin yaaddoo hawaasa addunyaa kana kan qooddatan ta’uu ibsaniiru. Dubbi himaan kun ittti aansuu dhaan humnootiin Afgaanistan dandeettii dirree lolaatti adda addummaa fiduu qabu turan jedhan Kirby.
Haa ta’u malee yaadi kun ennaa humnoonni Afgaanistan haleellaa Taliban of irraa deebiisuu dadhabanitti jijjiirame. Injifannoon isaan argatan meeshaa akka argataniif hidhamtoota akka hiikaniir carraa kenneef. Kun immoo humni isaanii waraanaa akka babal’atu taasise jechuu dhaan angawaan Yunaayitid Isteetis maqaan isaanii hin tuqamne VOAf ibsaniiru.
Yunaayitid Isteetis irra deddeebi’uu dhaan jalqaba haleellaa samii irraan meeshaalee waraanaa fi konkolaattot hataman qiyyaafata godhatee, humnoota Afgaanistan gara boodaatti deebisuu dhaan humnoota naga eegumsa Afgaanistan cimsuuf yaalaa ture.
Torbanneen darban keessa humnoota Taliban irratti fuuleffachuu dhaan magaalaalee ijoo kan akka Kandahaar, Heraatii fi Lashkaar Gah bakka isaan humnoota Afganistan waliin lola hamaa finiinsan samii irraan haleellaan raawwachuu angawoonni Yunaayitid Isteetis ibsaniiru.